Waxaan wadaagnaa wax yar oo ku saabsan soo iibsiga laakiin kuma filna haynta macaamiisha. Istaraatijiyadaha suuq-geynta weyn uma sahlana sida wadista wadista marba marka ka sii dambeysa, sidoo kale waxay ku saabsan tahay wadista hoggaanka saxda ah. Haysashada macaamiisha had iyo jeer waa qayb yar oo ka mid ah kharashka soo iibsashada kuwa cusub.
Markii uu faafay, shirkaduhu way foorarsadeen umana ayan xanaaq badnayn sidii ay u heli lahaayeen badeecooyin iyo adeegyo cusub. Intaa waxaa sii dheer, shirarka iibka qofka iyo shirarka suuqgeynta ayaa si weyn u carqaladeeyay xeeladaha wax ku iibsiga ee shirkadaha badankood. Intii aan u jeesanay shirarka dalxiiska iyo dhacdooyinka, awoodaha shirkado badan oo ay ku wadi karaan iibinta cusub ayaa la qaboojiyay. Tan macnaheedu waxa weeye xoojinta xiriirka ama xitaa kor u qaadista macaamiisha hadda jirta waxay muhiim u ahayd in dakhliyada la sii wado shirkaddooduna kor u kacdo.